Nordic Cosmetics Body Butter ? CBD & Avocado Oil ????????
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်သည်သက်သတ်လွတ်များပါဝင်ပြီးတစ်မူထူးခြားသောပုံသေနည်းသည်အသားအရေကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Body Butter Cream တွင်ထောပတ်သီးဆီပါဝင်ပြီးအသားအရေကိုနူးညံ့စေသည်။ ဤထုတ်ကုန်တွင် Shea butter နှင့် Panthenol ပါဝင်သောကြောင့်အသားအရေကိုကျန်းမာစေပြီးချောမွတ်စေသည်။ ဗီတာမင်အီးသည်အသားအရေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေသည့်ရန်မှကာကွယ်ပေးသည်။ သာယာသောသဘာဝသဘာဝအမွှေးအကြိုင်ကို Nordic Cosmetics ထုတ်ကုန်များလိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Nordic Cosmetics Body butter တွင် ၁၈၀ မီလီဂရမ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော CBD crystals များပါဝင်ပြီး၎င်းတို့တွင် GMOs များမရှိချေ။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စမ်းသပ်ခြင်းမရှိ, တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ 90 ml ပါဝင်ပါတယ် လျင်မြန်စွာစုပ်ယူ။ make-up ပြုလုပ်ထားသည့် EU တွင်သုံးနိုင်သည်။
Aqua, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Sorbitan Stearate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Panthenol, Polysorbate 60, Persea Gratissima ရေနံ, Phenoxyethanol, Parine, Acid, Acer, Acid, Acid, Acid, Acid, Acid, Acid၊ , Helianthus Annuus အမျိုးအနွယ်ဆီ
Nordic Cosmetics Body Butter ? CBD & Avocado Oil ????? 1 ??????????????
maria - 15. ??????????? 2020